America Region Archives - 24 News Press
एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाको सदस्यता वितरण र नविकरणमा तिव्रता
सरस्वती शर्मा (सरु), विस्कन्सिन, अमेरिका,जनवरी २९, २०२१ गैरआवासीय नेपाली संघ राष्टिृय समन्वय परिषद (एनआरएनए एन...
टोरन्टो, क्यानडा गैरआबासिय नेपालि सङ्ह क्यानडाका अध्यक्ष चिरन्जिबि घिमिरेले डिसेम्बर १७ तारिक बिहान क्यानडा सर...
अमेरिकामा अवैतनिक महावाणिज्यदूत ऋषि ढकालको पदावधि ४ बर्ष थप
लण्डन,क्यालिफोर्नियाको सान डिएगो क्षेत्रका लागि नेपाल सरकारका अवैतनिक महावाणिज्यदूत ऋषि पुन्नाखर ढकालको पदावधि...
डा. बिष्णुमाया परियार संयोजकमा एनआरएनए विज्ञ गोष्ठीमा महामारीको अवधिमा लैंगिक हिंसा र मानसिक स्वास्थ्यबारे भर्चुवल सम्बाद
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अमेरिका क्षेत्रको क्षेत्रीय सम्मेलन र दोश्रो विज्ञ भेलाद्वारा आयोजित ‘कोभिड-१९...
उत्तर अमेरिकाकाे नायगरा फल्समा चन्द्र सुर्य फहराएपछि
क्यानडा,यतिबेला विश्व कोरोना भाइरस महामारीको पिडाले थिलो थिलो भएको छ । यहि पिडामा विश्व पर्यटन क्षेत्र पनि नरा...
एकै दिन ६८ हजार ४२८ जना कोरोना भाइरस संक्रमित
एजेन्सी, अमेरिकामा एकै दिन ६८ हजार ४२८ जना कोरोना भाइरस संक्रमित फेला परेका छन् । यसैगरी गत २४ घण्टामा अमेरिका...
अमेरिकामा रहेका गोर्खालीहरुको संस्था गोरखा समाज अमेरिकाले कोरोनाबाट मृत्यु भएका पालुंगटारको मृतकको परिवारलाई गरे सहयोग
काठमाडौं । अमेरिकामा रहेका गोर्खालीहरुको संस्था गोरखा समाज अमेरिकाले कोरोनाबाट मृत्यु भएको पालुंगटारको मृतकको...
Posted By: 24 News Presson: January 31, 2021
सरस्वती शर्मा (सरु),
जनवरी २९, २०२१
गैरआवासीय नेपाली संघ राष्टिृय समन्वय परिषद (एनआरएनए एनसीसी) अमेरिकाले अहिले सदस्यता वितरण तथा नविकरण कार्यलाई तिव्रता दिएको छ।
आउदै गरेको राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई मध्यनजर गर्दै विगतका बर्षहरुमा जस्तै यस बर्ष पनि एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाले मेम्बरसिप ड्राइभ कमिटिनै गठन गरी यस कार्यलाई तिब्रता दिएको हो। यस्को उद्धेश्य अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरुलाई बैधानिक सदस्यको रुपमा एकबद्ध गर्नु हो।
यस्तै अमेरिकामा नेपालीको पहिचान बनाउन सदस्यता संख्याको मुख्य भुमिका रहने गर्दछ भने नेपालीलाई कुनै कठिनाई आइ परेको खण्डमा सदस्यता लिएको व्यक्तिको हकमा अधिकार तथा सुबिधाको उपभोग गर्न पनि यस किसिमको सदस्यता दर्ताले मुख्य भुमिका खेल्ने भएकाले सबै सदस्यता लिन एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाले सम्पूर्ण नेपाली समुदायलाई आग्रह गरेको हो।
जनवरी २८, २०२१ को सम्मको तथ्याङ्क अनुसार २०२१-२०२३ का लागि ३ हजार १ सय ७० जनाले साधारण सदस्यता लिएका छन्। १२ सय २० जना आजिवन सदस्य बनेका छन्।
गत कार्यकालमा ९ हजार भन्दा धेरै सदस्य रहेको एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाको सदस्यता यो पटक त्यो रुपमा गएको छैन। नविकरण वा दर्ताका लागि फेब्रवरी १५, २०२१ सम्म म्याद तोकिएको छ। यस अबधिमा करिव ५ हजारले सदस्यता लिनु वा नविकरण गर्नुले अझै सक्रियता लिनुपर्ने देखिइएको कुरा संघका पदाधिकारीहरुले जनाउनु भएको छ।
एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाले आफ्नो कार्यकालको प्रारम्भ मै उपाध्यक्ष वुद्धि सुवेदीको सँयोजकत्वमा ३१ सदस्य मेम्बरसिप ड्राइभ कमिटी गठन गरेको थियो। उक्त कमिटीले शुरुदेखि नै सदस्यता विस्तार सम्बन्धमा पटक पटक बिभिन्न कार्यक्रम मार्फत प्रचार प्रसारमा तिब्रता ल्याइएको छ।
कमिटिका संयोजक सुवेदी भन्नुहुन्छ, “हामी प्रचार-प्रसारका लागि रातदिन भर्चुअल, फोन, सामाजिक संजाल लगायतका कार्यक्रम गरेर द्रुत गतिमा गएका छौं। थुप्रै ठाउँमा भ्रमण पनि गरिएको छ। सबै राज्य च्याप्टरसँग समन्वय गरिएको छ। सदस्यता दर्ताको प्रकियाको बारेमा सचेत गराइ रहेकाछौ। हाम्रो कार्य जारी छ।”
सुवेदीले अगाडी थप्दै भन्नुभयो, “आजकल सदस्यता लिने गति झन बढेर गएको छ। अब फेब्रुवरी १५, २०२१ सम्ममा यो क्रम दोब्बर भन्दापनि धेरै सदस्यता लिनु हुनेछ भन्नेमा हाम्रो टिम बिश्वस्त छ।”
यसरी सदस्यता संख्या वृद्धि हुनुमा एनआरएन अमेरिकाले बिगतमा गरेका कामहरु नै मुख्य कारक रहेको संयोजक सुवेदीको ठम्याई रहेको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, “यसपटक एनआरएनले धरै कामहरु गरेको छ। धेरै युवा तथा महिला साथीहरु सक्रिय हुुनु भएको छ। एनआरएनको आवाश्यक्ता बुझ्नु भएको छ। त्यसकारण उहाहरुको सहभागिता धेरै हुने आशा गर्न सकिन्छ। हाम्रो चाहाना पनि त्यहिनै हो।”
एनसीसी अमेरकाका बरिष्ठ उपाध्यक्ष डा अर्जुन बन्जाडे सहित कार्यसमितिका सबै जस्तो पदाधिकारी, सदस्य तथा दर्जनौं एनआरएनएहरुले सक्दो मेम्बरसिप ड्राइभको कार्यलाई अगाडि बढाएको देखिएको छ। सामाजिक सँजालमा हेर्ने हो भने पनि यस बर्ष विगतका बर्षहरुमा भन्दा धेरै चहल-पहल र सकारात्मक टिप्पणिहरु देख्न सकिन्छ।
यस्तै, आगामी कार्यकालका लागि युवा तथा महिलाको सहभागिता र नेतृत्वका लागि महिलाहरुको संख्या अग्रसर रहेको पाउन सकिन्छ भन्नुहुन्छ एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाकी महिला संयोजक दिक्षा बस्नेत।
अहिले बनेका सदस्यहरुको प्रकृति हेर्दा यो पटक अमेरिकाका नेपालीहरु स्वतस्फुर्त सदस्य बनेको देखिएको मिडिया कोअर्डीनेटर सतीश चापागाईंले बताउनु भयो । “आफै अग्रसर भएर धेरैले सदस्यता लिनु एनआरएनएका लागि शुभ संकेत हो।” चापागाईंले भन्नुभयो।
सदस्यता संख्या बृद्धि गर्न तथा एनआरएनमा आवद्द हुनका लागि एनआरएन एनसीसी अमेरिकाका अध्यक्ष सुनील साहले बिज्ञप्ती नै जारी गरेर आग्रह गर्नुभएको छ।
एनआरएनएले स्थापना काल देखि नै प्रवासका नेपालीको हक हीतमा काम गर्दै आएको छ। नेपाली नागरिकताको निरन्तरतासंगै प्रवासिएका नेपालीको नेपालमा हक अधिकार खोज्न र नेपालमा बिपत्ति पर्दा परदेशबाट गरेको सहयोगको कारण यो संस्थाको महत्व चुलिएको छ। अझ कोभिड १९ को पेन्डामिकपछि यो संस्थाले संसारभरका नेपालीहरुलाई दिएको अभिभावकत्वले एनआरएनएमा आबद्ध हुनेहरु बढेको र अरु बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
एनआरएनए विश्वका असी देशका नेपाली आवद्द एउटा सामाजिक संस्था हो। एनआरएनए नेपाल सरकारमा दर्ता संस्था हो। नेपाल सरकारले यो संस्थाको निर्णयलाई आधिकारिक मान्दछ। त्यसैले जतिसक्दो छिटो सदस्यता दर्ता वा नविकरण गरेर संस्थालाई बलियो बनाउनु सबै प्रवासी नेपालीको दायित्व हो।
Posted By: 24 News Presson: December 17, 2020
गैरआबासिय नेपालि सङ्ह क्यानडाका अध्यक्ष चिरन्जिबि घिमिरेले डिसेम्बर १७ तारिक बिहान क्यानडा सरकारले ब्यबस्थापन गरेको कोभिड -१९ को टोरन्टोमा अबस्थित The Michener Institute मा खोप लगाई सकेका छन्। कोभिड -19 खोप लगाउने एन सि सि अध्यक्षहरुमा उनि पहिलो नेपाली हुन।
कोभिडको बेलामा अत्यन्तै उत्कृस्ट काम गरेका अध्यक्ष कोभिड सम्बन्धि बिभिन्न सुचनामुकल सामाग्रीहरु एनआरएन क्यानडा तथा आफनो ब्यक्तिगत सोसल मिडिया तथा अन्य माध्यम बाट प्रचार प्रसार गर्दै आईरहेका छन्।
टोरन्टो सिटि मा पब्लिक हेल्थमा कार्यरत भएको कारणले घिमिरे छिटो खोप पाएको जनाकारी प्राप्त भएको छ। कोभिड खोप लगाउन उत्सुक रहेको र लगाईसके पछि खुसि भएको उनको फेसबुक स्टाटसबाट देख्न सकिन्छ। उनले लेखेका छन”
कोभिड -१९ को खोप लगाउने अबसर प्राप्त भएकोमा क्यानडा सरकार , पब्लिक हेल्थ, टोरन्टो सिटि र Pfizer लाई बिशेष धन्यबाद दिन चाहन्छु।”
Posted By: 24 News Presson: November 23, 2020
लण्डन,क्यालिफोर्नियाको सान डिएगो क्षेत्रका लागि नेपाल सरकारका अवैतनिक महावाणिज्यदूत ऋषि पुन्नाखर ढकालको पदावधि ४ बर्ष थप गरिएको छ । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ढकालको पदावधि थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।ढकालको पदावधि थपिएको औपचारिक जानकारी दिइसकिएको छ । अब ढकालको पदावधि सन् २०२४ सम्म कायम रहनेछ । ढकाललाई नेपाल सरकारले पहिलोपटक सन् २०१३ मा अवैतनिक वाणिज्यदूत नियुक्त गरेको थियो । २०१५ मा अवैतनिक महावाणिज्यदूत नियुक्त गरिएकोमा अहिले त्यसैलाई निरन्तरता दिइएको हो ।
महावाणिज्यदूत ढकाल तैयारी पोशाक र हस्तकलाका बस्तु नेपालबाट अमेरिका आयातगर्ने एक अग्रणी व्यवसायीका रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको पश्चिम तटीय राज्य क्यालिफोर्नियालाई आधार क्षेत्र मानेर आफ्नो व्यापार प्रवर्धनका साथै नेपाल र नेपालीपनको जगेर्ना गर्नमा ढकाल सकृय रहदै आउनुभएको छ ।एकपटकको नेपाली, संधैको नेपाली अभियान अन्तर्गत दोहोरो नागरिकताको प्रावधानका लागि एनआरएन आइसीसीको समितिमा रहेर नेपालको संविधानमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधान राख्न पहल गर्ने एक अभियन्ताको रुपमा पनि ढकालको परिचय स्थापित छ ।
२००५ मा अमेरिका आउनु भएका ऋषिको राइजिङ इन्टरनेशनल इन्क सन् २०१३ सम्म नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुने वस्तुको अग्रणी आयातकर्ता भई सकेको थियो । सन् २०१४ मा नेपाल सरकारकातर्फबाट महत्वपूर्ण व्यवसायिक व्यक्तित्वका लागि दिइने सम्मान तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट ढकाललाई प्रदान गरिएको थियो ।अहिले उहाँले थाइल्याण्ड, चीन र भारतबाट समेत सामानहरू आयात गर्न थाल्नुभएको छ भने रेष्टुरेण्ट, रियलस्टेट जस्ता व्यवसायमा समेत लगानी गर्नुभएको छ । ढकाल परिवारको क्यालिफोर्नियामा केही व्यापारिक प्रपर्टीहरुमा लगानी छ ।ढकालले नेपालका बिभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नुभएको छ । एनआरएनको हैसियतमा उहाँको कमाइको केही हिस्सा नेपालमा पनि लगानी भएको छ । हाइड्रो पावर, नेपाल क्यान्सर अस्पताल र तक्षशिला एकेडेमीमा ढकाल परिवारको लगानी छ ।ढकाल परिवार सामाजिक कार्यमा पनि त्यतिकै सकृय छ । लसएन्जलसमा रहेको पशुपति फाउण्डेसनको स्थापनाको लागि महापुराण लगाएर झन्डै ११ लाख डलर सङ्कलन गर्ने कार्यको संयोजन गरेका ढकाल परिवारले फाउण्डेसनलाई ७५ हजार डलर आर्थिक सहयोग समेत गरेको थियो ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट सानडियागो सहरका लागि अवैतनिक वाणिज्यदुतका हैसियतमा २०१३ मा नियुक्त ढकालले आफूलाई सानडियागो क्षेत्रमा मात्र सीमित राख्नुभएको छैन । सिंगै क्यालिफोर्निया र खासगरी लसएन्जलस क्षेत्रमा उहाँ निकै सकृय रहदै आउनुभएको छ ।
Posted By: 24 News Presson: October 06, 2020
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अमेरिका क्षेत्रको क्षेत्रीय सम्मेलन र दोश्रो विज्ञ भेलाद्वारा आयोजित ‘कोभिड-१९ को अवधिमा लैंगिक हिंसा र मानसिक स्वास्थ्य‘ एनआरएनए भर्चुवल विज्ञ गोष्ठीमा प्यानेलिष्ट र अतिथि वक्ताहरूले कोरोना महामारीको अवधिमा नेपाल र विश्वभरनै महिला हिंशामा बढोत्तरी भएको उल्लेख गर्दै समाज, सरोकारवाला निकाय र राज्य संयन्त्रले महिला र बालबालिकाको सुरक्षाको निम्ति तत्काल कदम चाल्नु पर्ने कुरामा जोड़दिएका छन्।
उक्त कार्यकममा एनआरएनए आइसिसि महिला संयोजक भुमा लिम्बुले स्वागत मन्तब्य राखेकि थिईन् भने सन् २०१९ कि मिस नेपाल युएसकि दोश्रो उप-बिजेता मेघा रौनियार कार्यक्रमको मोडरेटर रहेकिथिईन्।
Posted By: 24 News Presson: September 08, 2020
क्यानडा,यतिबेला विश्व कोरोना भाइरस महामारीको पिडाले थिलो थिलो भएको छ । यहि पिडामा विश्व पर्यटन क्षेत्र पनि नराम्रो सँग थलिएको छ । मान्छेहरु घर भित्रै छन् । नयाँ ठाउँमा घुम्ने, रमाइलो गर्ने धेरैका सपना कोठामै थन्क्याएरका छन । तर विश्वका धेरै मुलुकहरु नेपाल जस्तो पुर्ण बन्देज अवस्थामा भने छैनन् । विस्तारै बाहिरी संसार सँग स्पर्श गर्दै आफुलाई पुर्ववत अवस्थामा उभ्याउने प्रयास गर्दै छन् ।
राष्ट्र र राष्ट्रियता प्रतिको माया बसन्तले नायगरा फल्समा अझ बढि सम्झिए । हातमा चन्द्र सुर्य अंकित राष्ट्रिय झण्डा बाकेर नायगरा पुगेका बसन्तले केही समय नेपाली झण्डा त्यहि फहराए र सम्झिए नेपाली माटो, नेपाली मन ।‘म केवल उक्त स्थानमा रमाइलोको लागि मात्रै पुगेको थिएन, मेरो देश नेपालको झण्डा पनि त्यहाँ फहराउनु थियो, त्यो सपना पूरा भयो उनी भन्छन् । मेरो देशमा पनि विश्व चिनाउने सगरमाथा छ , त्यहि कारणले पनि म नेपाली राष्ट्रिय झण्डा बोकेर त्यहा पुगेको हु’ उनले भने ।
एजेन्सी, अमेरिकामा एकै दिन ६८ हजार ४२८ जना कोरोना भाइरस संक्रमित फेला परेका छन् ।
यसैगरी गत २४ घण्टामा अमेरिकामा ९७४ जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ । जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार हाल अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या ३५ लाख ६३ हजार ८ सय ४८ पुगेको छ । यसैगरी मृतकको संख्या १ लाख ३८ हजार २६७ छ ।
अमेरिकामा सबैभन्दा धेरै संक्रमित लसएन्जलसमा छन् । लसएन्जलसमा १ लाख ४३ हजार २ सय ७ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ ।
Posted By: 24 News Presson: July 11, 2020
काठमाडौं । अमेरिकामा रहेका गोर्खालीहरुको संस्था गोरखा समाज अमेरिकाले कोरोनाबाट मृत्यु भएको पालुंगटारको मृतकको परिवारलाई सहयोग गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारको क्रममा कतारमा रहेका गोरखा जिल्ला पालुङ्टार नगरपालिका वडा नं ७ स्थायी निवासी ४४ बर्षीय व्यक्ति को कोरोनाबाट मृत्यु हुन पुगेको थियो ।
घर फर्कदै गर्दा तोकिएको मापदण्डनुसारको क्वारेन्टाइनमा बस्दा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएपछि गोरखा अस्पतालको आईसोलेसन कक्षमा उपचाररत हुँदा उनको मृत्यु भएको थियो । कोरोनाको संक्रमणबाट गोरखा जिल्लामै पहिलो व्यक्तिको यसरी मृत्यु हुन पुगेकोमा गोरखा समाज अमेरिकाले गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै परिवारको सहयोगका लागि एकलाख एकहजार एकसय एघार (१,११,१११)नेपाली रुपैया सहयोग उपलब्ध गराईएको समाजका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बैदेशिक रोजगार नै आम्दानीको मुख्यश्रोत भएकोले उहाँको श्रीमती, ११ बर्ष १ छोरी र ४ बर्षको एक छोरालाई केहि राहत पुगोस् भन्ने पवित्र उदेश्यले हामी अमेरिकामा बसोबास गर्ने सम्पुर्ण मनकारी गोरखालीहरुले आफ्नो पिडालाई एकातिर पन्छाएर गोरखा का समाजसेवी कमल दानीको अनुरोधमा गोरखा समाज अमेरिकाले एउटा सानो सहयोग स्वरुप पालुड्टार नगरपालिकाका प्रमुख ई दिपक बाबु कँडेलजी मार्फत एकलाख एकहजार एकसय एघार नेपाली रुपैया सहयोग उपलब्ध गराईएको जानकारी गराउँदछु’ श्रेष्ठद्धारा जारी विज्ञप्तिमा छ
एनआरएनए क्यानडाद्धारा समाजमा भ्रम फैलाउने कार्यप्रति गम्भिर आपत्ति, गलत सूचना सम्प्रेषण नगर्न सबैमा आग्रह
Posted By: 24 News Presson: July 06, 2020
क्यानडा : विश्वभर कोभिड १९ को महामारी चलिरहदा संसारभर फैलिएका गैर आवासिय नेपालीहरु आफ्नो समुदाय र देशका लागि आवश्यक सहयोग गर्न तल्लिन छन् यो अभियानमा गैर आवासिय नेपाली संघ – क्यानडा, पनि अछुतो छैन । संघले क्यानडामा महामारीको प्रभावले आपतमा परेका नेपालीहरुलाई आवश्यकता अनुसार आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गर्दै आईरहेको छ ।
यसै बिच संघले आर्थिक हिनामिना गरेको भनी आरोप समेत खेपिरहेको छ । नेपालबाट संचालित एक अनलाइनले ‘कोरोना प्रभावितका लागि संकलन राहत एनआरएनए क्यानडाद्धारा झ्याम’ शिर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । एनआरएन क्यानडाका कार्यकारी सदस्यहरुको नामै उल्लेख गरेर आर्थिक हिनमिनाको समाचार अनलाइनमा सम्प्रेसित छ । उक्त समाचारको चर्को खन्डन गर्दै संघले आज अध्यक्ष चिरन्जिवी घिमिरे र महासचिब पिताम्बर भट्टराईको हस्ताक्षर सहितको एक विज्ञप्ती जारी गरेको छ ।
फ्री मेम्बरशिपको अबधारणा के हो ? गर्न सकिन्छ भने योजना खोइ ?
लण्डन ,एनआरएनए अमेरिकाले यो अप्ठेरो परिस्थितिमा धेरै सोच विचार गरेर साधारण सभा र नलेज कन्भेन्सन गर्ने जमर्को गरेकोमा एनआरएनए अमेरिकाका प्रमुख संरक्षक तथा निबर्तमान अध्यक्ष डाक्टर केशव पौडेलले गौरबको महशुस गरेको बताउनु भएको छ । एनआरएनए अमेरिकाको नवौं साधारण सभा र नेशनल नलेज कन्भेन्सन २०२० को उदघाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै उक्त कुरा बताउनु भएको हो। टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर समयको माग अनुसार अन्लाईन संचालन गर्नु भएकोमा वर्तमान कार्य समितिलाई धन्यवाद दिनुभयो। अमेरिकाको प्रतिष्ठित अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टर पौडेलले यो कोभिडको महामारीमा एनआरएनए अमेरिकाले नेपाली समुदायमा गरेको काम मुक्तकण्ठले प्रशंशा मात्र गर्नु भयो।
उहाँले संसारका सबै एनसीसीभन्दा अमेरिकाको एनसीसी बढी प्रभावित भएको देख्दादेख्दै आईसीसीले आर्थिक सहयोग नगरेकोमा खेद ब्यक्त गर्नुभयो। नेपाल र संसारकका नेपालीलाई अफ्ठेरो पर्दा एनसीसी अमेरिकाले सबैलाई सहयोग गरेको छ तर अमेरिकाका नेपालीलाई अफ्ठेरो पर्दा आईसीसीले बेवास्ता गरेकोमा रोष प्रकट गर्नु भएको हो। रपनि, अमेरिकाले उल्टै सहयोग गरेकोमा एनआरएनए अमेरिकाको प्रशंशा गर्नुभयो ।
एनआरएनए अभियानको मुख्य मुद्धा नागरिकताका समस्या अझैसम्म समाधान नभएको भन्दै आइसीसीका नेतृत्वलाई सचेत बनाउनु भयो। उहाँले अध्यक्षले एनआरएनए नागरिकताको समस्या समाधान हुन् लागेको भनेर भन्नुभएको पनि यो समस्या समाधान गर्न अझै धेरै समय लाग्ने देखिएकोले आईसीसी चनाखो हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। उहाँले दोहोरो कर प्रणालीको बारेमा काम शुरु नै गर्न नसकिएको बिषयलाई पनि जोड दिनुभयो।
एनआरएनए आईसीसीलाई प्रोजेक्ट बेस कार्यक्रम ल्याउन अनुरोध गर्नुभयो। कुनैपनि योजना टाईम लाईन र आवश्यकता पहिचान गरेर मात्र अगाडी बढाउन पनि उहाँले सुझाब दिनुभयो। सस्तो लोकप्रियताका लागि मनमा जे आयो त्यही कुरालाई योजना भनेर अगाडी नबढ्न उहाँले केन्द्रिय नेतृत्वलाई सचेत गराउनु भयो। उहाँले प्रश्न गर्नुभयो -फ्री मेम्बरशिपको अबधारणा के हो ? गर्न सकिन्छ भने योजना खोइ ? सकिन्न भने किन भनेको ? पौडेलले आईसीसीले ल्याएका रचनात्मक योजनाहरुमा आफु सधै साथमा रहेको पनि बताउनु भयो।
निबर्तमान अध्यक्ष तथा प्रमुख संरक्षक समेत रहनु भएका डाक्टर पौडेलले डायस्पोराका नेपालीहरुको ज्ञान, सीप र साधनलाई एक आपसमा काम लगाउन सकियोस र नेपाल र नेपालीको हीतमा पनि उपयोग गर्न सकियोस भनेर आफुले विज्ञ सम्मेलनको अबधारणा अगाडी ल्याएको बताउदै यसको निरन्तरता दिएकोमा वर्तमान कार्यसमितिलाई धन्यवाद दिदै र सफलताको शुभकामना ब्यक्त गर्नु भएको थियो ।
एनआरएनए नलेज कन्फेरेन्स सेप्टेम्बर ५ मा क्यानाडामा आयोजना हुने
Posted By: 24 News Presson: July 03, 2020
लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) नर्थ अमेरिका संयोजक राजन त्रिपाठीको अध्यक्षतामा बसेको यस क्षेत्रका पदाधिकारी बैठकले क्यानडामा नलेज कन्फेरेन्स निर्णय गरेको छ । संयोजक त्रिपाठी सँगै डिआरसी, आइसिसी सदस्य ,मानार्थ आइसिसी सदस्य तथा यस क्षेत्रका एनसीसीका अध्यक्ष महासचिव सहितको बैठकबाट आउँदो सेप्टेम्बर पहिलो हप्तामा क्यानडामा नलेज कन्फरेन्स गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरिएको हो ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण बाट गत जुन २०–२१ मा गर्ने भनिएको नलेज कन्फ्रेन्स कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो । मिटिङमा उपस्थित सम्पुर्ण सदस्यले अमेरिकाको अधिवेशनलाई भव्य सफल बनाउन शुभकामनासमेत दिएका थिए भने सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्ने कुरा समेत व्यक्त गरेका थिए ।
सेप्टेम्बर ५ मा गर्ने कार्यक्रमलाई भव्य सफल बनाउन छिट्टै बिभिन्न कमिटी हरुको गठन गरिने जानकारी आरसी राजन त्रिपाठीले बताए । पुनः क्यानडामा नै उक्त कार्यक्रमको लागी मिति तय भएपछी आफुहरु उत्साहित भएको र छिट्टै कार्यसमिति बैठक बसेर यसलाई सफल बनाउन तयारी थाल्ने एनआरएनए एनसिसि क्यानडाका महासचिब पिताम्बर भट्टराईले बताए । उनले उक्त सम्मेलन सभ्य र भब्य बनाउन आफुहरुले कुनै कसुर बाँकी नराख्ने समेत बताए ।